induction Hardening Steel Cam Assembly-HLQ rafitra fanamafisana induction
Home / Applications / Induction Hardening / Fivondronan'ny Cam Cameras
fivorian'ny Hard Cam Steel
Sokajy: Induction Hardening Tags: mividy milina manamafy, hamafin'ny, mihazakazaka mihazakazaka hazakazaka, fampidirana fasteners henjana, fampidirana pin, cam mafy vy, AO amin'ny fanamafisana, Ao amin'ny masinina mafy, AO AMIN'NY fanamafisana ambonin'ny tany, induction hardening, fakan-tsary mihanaka mafy, crankshafts mihamafy, vidin'ny milina fanamafisana, fanamafisana Hard Cam Steel
Tanjona: Induction hardening ny faritry ny fivorian'ny cam vy vy matevina
Fitaovana: ¼ ”fivorian'ny cam vy vy matevina amin'ny karazana geometry samihafa
Temperature: 1650 ºF (900 ° C)
Matetika: 177 kHz
DW-UHF-10kW rafitra fanamorana ny induction, miaraka amina tobin-tsolika lavitra misy capacitor 1.0µF iray ary coil fanafanana fampidirana izay natao sy novolavolaina manokana ho an'ity rindranasa ity
Coil helika roa-roa no ampiasaina hanefana ireo cams. Ny fotoana hafanana dia miovaova amin'ny 120-150 segondra. Aorian'ny fanamafisana dia esorina anaty rano ireo ampahany.
Induction Hardening ny velaran-tanety any ivelany misy ny induction dia miteraka:
• fanafanana fanamiana ho an'ny valin'ny fanamiana
• coil iray dia azo ampiasaina amin'ny geometry maro
• valiny tsy miovaova
Misy an'arivony mahomby be milina fanamafisana induction izay mamokatra faritra an-tapitrisany omena ho an'ny sehatra indostrialy isan-karazany. Anisan'ireo singa mazàna manamafy ny fanamafisana ny induction (IH) ny faritra toy ny camshafts, crankshafts, gears, sprockets, shafts transmission, ball studs, pin, racks mifono nify, spindles kodiarana, hazakazaka, fasteners, fitaovana miasa, kiraro manara-penitra ho an'ny tany- milina mihetsika - tsy misy farany ny lisitra. Ohatra, ny sary dia mampiseho karazana geometry kely izay mihamafy matetika.
Ny dingana vita amin'ny vatan'ny fanamafisana orina
Hamenina ny vy tsy misy vy vita amin'ny raozy miaraka amin'ny induction